Barattootii yuniversitii Har-Maayaa fi Amboo rakkoo Oromiyaan keessa jirtuuf barumsa dhaamne jedhan
Ummata keenna rakkoo keessa jiru faluuf barumsa dhaamne jedhan barattootii yuniversitii Har-Maayaa fi Amboo
Oromiyaatti fulaa hedduutti ijoolleen barachuutti hin jirachii jechumatti jiran. Barattootii yuniverstii Oromiyaa hedduullee tanuma keessa jiran.
Ijoolleen tun waan hedduu maqeeffattee barumsa dhaabde.Waan himachuutti jiran keessaa tokko rakkoo godinootii Oromiyaa Somaaleen wal daangessaan keessa jiran rakkoo qormaata bahiinsaa “exit exam”, fudhachuu diduu, akka waraanii federalaa yuniverstii keessa qubate bahuu fi rakkoo waraanii kun fide jedhan,maqaa siyaasaatiin namii hedduun hidhamuu,daangaan Oromiyaa ulfinna dhabuu fi waan hedduu himatan.
Barattootii yuniverstii Haroo Maayaa, akka ijoolleen achii dubbinfe jedhanitti rakkoo hedduu himatanii nama isaan gaafatu dhabii dhiisanii bahan.
"Fulaaban 28 mooranaa kana seennee ergasii asi mormii guddaa irra turee.Deebii argannee waan hin turreef barattoonii dhiisanii bahan,nu ” jedha.
Akka ijoolleen tun jedhanitti namii mootummaa keessaa dhufee rakkoo isaanii tana gaafatee faleefilleen hin jiru “nuyi barachuu dhufne malee dararamuu hin dhufne gaafi teenna wacuma simbiraati ilaalaan.”
Nama Haroo Mayaatii dubbifne keessaa tokko nama barumsa yuniversitiitti ganna sadeessoo batatu “ummata keenna awwaalannee daangaa keennya kabachiifannaaf barumsa dhiise. jedhanii babahan
Amma fkn Booranatti waan tahaa jiraa walumaan beekna osoo namni keenya awwalaaa dhabee gatamuu qalbiin maaliin baranna,” jedha. Ambaaoolleetti akka warrii achii dubbifne jedhutti ijoolleen barumsa dhiiftee galuutti jirti
“Yaa’aa jirti ijoollee yaa’aa jirti. Walisoo,Amboo fkn kampaaaa Awwaaroo keessaa ijoolleen yaa’aa jirti,” jedha.Jarilleen rakkuma daangaa,akka hidhamaan hiikamu,akka daangaa Oromiyaa kabjamtuu fi waan hedduu himata.
Gama kaaniin dhaabii Dh.D.U.O yaada kalee marsaa interneetii ufii irrattti baaseen barachaa qabsaahuu wayya. Barachuu baannaan mirga ufiillee qabsaahuu hin dandahan.
Yaada Dh.D.U.O barattoota yuniversiti bahan irratti kenne kanaa gadi.
Uummani Oromoo barachu qaba,Lammiin barate immoo mirga isaa gaafata” Jeneraal Taaddasaa Birruu jedhe jedha barreeffamii dhaabii Dh.D.U.O baase..
Amma duraas tooftaan itti hogganamu qabnu maal ta’uu akka qabu ibsii kennamee jira, mariinis taasifamee wali galteen uumamee ture.
Qabsoon keenya kan galmaan ga’ee ummata Keenya bakka isa fakkaatu bira kan geensisu dandeenyuu yoo barannee qofa akka ta’e wal hubannoon uumamee ture, gochii har’a baratoota kanaan raawwatamee kun sirrii miti.
Baratoonni keenya waan waadaa walii galeen alaa socha'uun sirrii miti, Barachaa qabsoofna,Qabsa'aa Baranna jenne waligalee jirraa.Gonkuma baratoonni keenya mana Barumsaa gadhiisanii bahun kan galma keenyatti nudhiheessu ta’u hin danda’u.
Murtiin bekkumsaa fi abshaalumaadhaan kan hin murteefamne, dogoggoora guddaa akka ta’e hubachuu qabdu. Barattooni Yunivarsiitii gara garaa Oromiyaa keessa jiran keessaa barnoota isaanii addaan muruun mooraa gadi dhiisanii ganama har'aa bahaan kun maali sababni isaani?
Baratoonni kuneen sababnii mooraa Yunivarsitichaa gadhiisani bahaanif
1.Dhimma Lammilee keenya Naannoo Somaalee irraa sababa Oromummaa isaanitiif jecha qa’ee fi qabeenya isaanirraa buqqa’aanin kan walqabatuu fi gaafii isaaniitiif gara Yuunivarsiitii fi Qaama Mootummaa irraa deebisaan gahaan kennamuufi dhabun.
2. Deeggarsa Lammii keenya buqqa’eef Yunivarsiitichi deeggarsa taasisuu dhabu.
3. Qormaata bahinsa Yuunivarsiitichi kennun "Exit Exam" waliin wal qabatee torbee kana guutuu gaafii mirga isaani falmachaa akka turan akka sababaati dhiheeaani jiru.
Sababnii kun yeroo kana keessatti barnoota keenya addaan kunnee akka baanu kan nama taasisuu miti, sababa qubsaa miti. Amma ummata Oromoo fayyaduu fi galma barbaanne bira yeroo gabaabaa keessatti akka geenyu barbaadame barnoota keessanitti deebii’u qabdu.
Barnoota keenya barachaa qabsoo keenya bekkumsaa gaggeessaa gara fuladuraa deemu qabdu. Maatiin baratootaas rakkoo kana hubachuun baratoonni kun gara barnoota isaani akka deebi’an gorsuu qabdu jenna. Baratoonni amma mooraa Yunivarsitii keessa jirtan immo tasgabbooftanii barnoota keessan itti fufu qabdu, wal goorsaa, waldhagahaa, barnoota keessan irratti jabaadhaa. Kan ummata Oromoo fayyadus kana waan ta’eef. Tasgabbaa’aa, Tasgaba'uutu nurra eegama.